Gobolka Afrikada Saxar ee hoose, Seeds Good Meaning Waxkasta oo u shaqeeya beeralayda
Machadka Cilmi Baarista Caalamiga ah ee loogu talagalay Semi-Arid Tropics (ICRISAT) waa hay'ad caalami ah oo aan faa'iido doon ahayn oo cilmi-baaris ku sameeynaysa cilmi-baaris ku saabsan horumarinta Aasiya iyo qaar ka mid ah Afrika oo ka hooseeya Sahara Afrika oo leh wada-hawlgalo ballaaran oo adduunka oo dhan ah. 6.5 milyan oo kiilomitir oo dhul ah oo ka kooban 55 dal, saddexda shidaal ee yar yar ayaa ka badan 2 bilyan oo qof, 644 milyan oo ka mid ah saboolnimada ba'an. ICRISAT waxay ujeedadeedu tahay inay hagaajiso hab nololeedka dadkaas iyada oo loo marayo cilmi-baaris cusub oo beeraha, kordhinta helitaanka cunto nafaqo leh iyo ka caawinta beeralayda inay samaystaan nolol waara.
"Haddii aad haysato miraha wanaagsan, waxaad ka horeysaa ciyaarta," ayuu yiri Souleman Ballo, oo ah oday la ixtiraamo oo ka socda Mpessoba, oo ah tuulo ku taalla wadada udhaxeysa Segou iyo Koutiala, oo ku yaalla Koonfurta Mali. Beeraley 62 jir ah, oo madax ka ah 25 xubnood oo xubin ka ah qoyska, iyo madaxwaynaha iskaashatada beeraleyda Jigi Seme, Souleman wuxuu ogyahay sida miraha wanaagsan ugu wanaagsan tahay beeraleyda. Iskaashatada, oo ka kooban 65 qoys, waxay soo saartaa masagada iyo galleyda, iyo digirta sida digirta. Waxay dhowaan ku heshiiyeen qandaraas ka yimid Barnaamijka Cuntada ee Barnaamijka Cuntada Adduunka ee Barnaamijka Horumarinta Horumarinta si ay u iibiyaan hadhuudhka hadhuudhka. Waxay sidoo kale ku hawlan yihiin soo saarida abuur tayo leh oo ay ku jiraan bacriminta masaggada cusub.
80% dadka reer Malta waxay ku tiirsan yihiin beeraha beeraha hooseeya ee hab nololeedkooda, badanaaba waxaa soo gaadhay roobab aan la saadaalin Karin, carrada saboolka ah, iyo helitaanka kooban ee waxsoosaarka wax soo saarka. Beeralayda intooda badani waxay heystaan dakhli maalin kasta ah oo ka yar $ 2, markaa helitaanka abuurka ka wanaagsan ayaa inta badan ah tallaabada ugu horreysa ee ugu horeysa ee lagu kobciyo dalagyada iyo amniga raashinka ee ka hooseeya Afrika.
Cilmi baarayaasha beeraha ee ICRISAT iyo Malian Institut d'Economie Rurale waxay horumariyeen noocyo badan oo hagaagsan oo hadhuudh ah iyo masago, oo leh qaar ka mid ah guulaha dhalidda ee cajiibka ah. Tusaale ahaan, cusub Beelaha hadhuudhka ah iyada oo ku salaysan noocyo kala duwan oo deegaan ah, ayaa siinaya wax-soo-saarka 40% ka sareeya noocyada kala duwan ee beeraleyda ugu wanaagsan. Souleman ayaa xitaa warbixinta soo saarkiisa soo saartay saddex ton oo hektar ah oo ku yaal goobaha ugu fiican marka beeralayda oo badana qaada hal ton ama ka yar. Kordhinta korodhkani waa nolol-beddel maaddaama hadhuudhgu uu muhiim u yahay cuntada iyo dakhliga.
Hubinta noocyadan soo hagaagay iyo Beelaha la heli karo, oo ay aqbalaan beeralayda ayaa ah hawsha xigta. Beeralayda maliyaanka maaha mid caado u ah iibinta miraha. "Beeraley wanaagsani waxay soo saartaa abuurkiisa," ayuu yiri Souleman. Tani macnaheedu maaha in beeralayadu aysan isku dayin abuur cusub. Dhab ahaantii, waxay si joogto ah u tijaabiyaan noocyo cusub iyagoo helaya abuur marka loo eego habka aan rasmiga ahayn, gaar ahaan qoyska iyo deriska dhow.
Taageerida wax soosaarka abuur iyo suuq geyn baahsan oo ay iska kaashadeen iskaashatada shinnida maxalliga ah sidaa darteed waxay ku habboon yihiin beeroleyda reer Maali. Halka ay iskaashatooyinku ka shaqeeyaan, waxaa jira qiime aad u fiican oo ku habboon qaadashada dalagyada la wanaajiyey. Daraasad dhowaan la sameeyay ayaa muujisay in korsashada ay ahayd 25 ilaa 50% tuulooyinka laga soo saaray abuurka, marka la barbar dhigo celceliska qaranka qiyaastii 10 boqolkiiba. Souleman ayaa taas noo sheegaya Jigi Seme waxay soo saartay hal tan oo ah miraha miraha geedka masaggada ah ee 2014 waxaana lagu iibiyey dhammaan 1 ilaa 5 kg bacaha (abuur ku filan si ay u beeraan ilaa hal hektar). Waxa uu rajeynayaa xitaa guusha weyn ee 2015.